🥇 ▷ Qualcomm waxay daabacdaa qoraal dhejin ah oo ku dhawaaqaya dhacdo muhiim ah Sebtember 24 ✅
Qualcomm waxay daabacdaa qoraal dhejin ah oo ku dhawaaqaya dhacdo muhiim ah Sebtember 24
Shalay, dhejin la xiriirta dhacdo dhici doonta Sebtember 24, ilaa hada si rasmi ah ugaysan shaacinin Qualcomm, ayaa kasoo muuqday khadka tooska ah. Boostada ma bixinin wax faahfaahin ah oo ku saabsan dhacdadan laakiin waxaa la rumeysan yahay inay la xiriirin karto soo saarista taleefanka gacanta ee ‘Xiaomi Mi 9 Pro 5G’ iyo Mi MIX Alpha oo loo qorsheeyay in lagu dhawaaqo maalintaas. Intaa waxaa sii dheer, Sony Xperia 5 iyo Realme X2 ayaa iyaguna iman doona maalintaas. Qaar ka mid ah wararka xanta ah ayaa sheegaya in shirkadda sameysa chip-ka Mareykanka sii deyn doonto chip-keeda cusub ee Snapdragon 865.
Telefoonnada casriga ah ee imaan doona isla maalintaas ayaa la imanaya processor processor. Xiaomi Mi 9 Pro 5G wuxuu adeegsadaa Snapdragon 855+ SoC. Sony Xperia 5 ayaa la timid Snapdragon 855b, halka Realme X2 ay ku yaalliin chip-ka Snapdragon 730G. Marka laga hadlayo taleefanka ‘Xiaomi Mi MIX Alpha’, processor-ga lama yaqaan hadda.
Malaha, dhacdada Qualcomm ee Sebtember 24 waxay la xiriirtaa mid ka mid ah seddexda magac ee casriga ah ee lagu xusay. Suurtagalnimada in lagu dhawaaqo qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 865 chipset’ waa mid aad u hooseeya. Sida ku xusan dhaqankii sanadihii hore, Snapdragon 865, oo ah magaca loo yaqaan illaa iyo hadda, ayaa la filayaa inuu ka soo baxo dhammaadka sannadka 2019 waana inuu gaaro suuqa qeybtii hore ee 2020. Haatan, waxay wali sii ahaaneysaa oo keliya in la sugo ilaa taariikhdaas in la ogaado in Qualcomm uu keeni doono. (Xigasho)
Miyaad u malayn in dhacdada lagu daabacay sawirka bisha Sebtember 24 uu wax xiriir ah la leeyahay kan xiga ee Snapdragon 865 chipset?